Xubin Is-Adeeg - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xubin Is-Adeeg
Ku hay kor daryeelkaaga caafimaad.
Ka ilaali macluumaadkaaga daryeelka caafimaad bogga xubinta ee khadka tooska ah. Halkan waxaad si fudud uga heli kartaa dukumiintiyada qorshaha, daabacan kartaa kaarkaaga Aqoonsiga, oo waxaad ku bixin kartaa biilasha si aamin ah. Haddii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan helitaanka daryeel ama cilmi baaris ah waxa ku jira qorshahaaga hadda, waxaad ka heli kartaa khadka tooska ah. Waxaa jira astaamo badan oo is-adeegsi ah oo ka dhigaya mid fudud in la abaabulo.
Akhriso hagaha xubinta 'myCHPW' ee xariirka isticmaalaha si aad u bilowdo.
Haddii aad ku cusub tahay barnaamijka 'CHPW Medicare Advantage' oo aad qabtid su'aalo ku saabsan caymiska qorshahayaga, fadlan nala soo xiriir. Kooxdayada saaxiibtinimo, kooxda Adeegga Macaamiisha ee maxalliga ah ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 galabnimo 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711). Waxaad sidoo kale noo soo diri kartaa emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii aad u baahan tahay nuqul kaarkaaga aqoonsiga ah, waad soo dejisan kartaa ama ka daabacan kartaa khadka tooska ah.
Ku soo dejiso kaarka aqoonsiga taleefankaaga gacanta oo ka qaado shaashadda shaashadda. Habkaas, had iyo jeer waad haysataa adiga.
Gudbinta dalabku waa fududahay. Soo gal koontadaada 'myCHPW' si aad u eegto sheegashooyinkii hore una soo gudbi codsiyadaada hadda.
Adeegyada qaarkood, daaweynta iyo daawooyinka waxay u baahan yihiin oggolaansho ka hor inta qorshuhu uusan daboolin. Bixiyahaaga caafimaad ayaa soo gudbin doona wixii codsi ah. Baro wax badan oo ku saabsan nidaamkan iyo sida loola socdo bixiyahaaga.